Laser Cutting Machine, Laser achiita zvokutemera Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser
Welcome to Golden Laser
Golden Laser chinotarisa pakupa akangwara, digitaalinen, uye zvoga Laser mhinduro.
Akaigadzira Laser mugadziriro nokuda kwokuparadza, achiita zvokutemera uye zvichiratidza. The nyanzvi mune CO2 Laser nokuveza muchina uye Galvo Laser muchina.
Kubva pakutanga Consulting kuti chikumbiro nemiedzo wenyu chakagadzirirwa zvinhu mu dzakananga indasitiri kuti kudzidziswa vanoshandisa uye basa romunyika yose - Golden Laser inopa nzwisisika Laser zvinogadzirisa, kwete chete chete muchina!
Model No: JMCCJG / JYCCJG Series
Yekumusoro Yekuita yega Textile Fabric Laser Kutema Machine
Iyi nhepfenyuro CO2 flatbed laser yekucheka muchina yakagadzirirwa yakakura machira rolls uye zvinyoro zvinyoro otomatiki uye zvinoramba zvichitemwa. Inotungamirwa negear ne rack ne servo mota, iyo laser cutter inopa yekumusoro yekucheka nekukurumidza uye kukurumidza.
Model No: JMCCJG-350400LD
CO2 Laser Cutter yeFilter Shamba Indasitiri Yezvekucheneswa Machira
Yakanyanya usahihi magiya uye rack inotyairwa. Kucheka kumhanyisa kusvika 1200mm / s. CO2 RF laser 150W kusvika 800W. Vacuum conveyor system. Auto-feeder nekunetseka kugadzirisa. Inokodzera kumicheka yekucheka jira, mafirita mats, polyester, PP, fiberglass, PTFE uye indasitiri yemachira.
Model No: JMCZJJG (3D) -250300LD
Fabric Air Duct Laser Kucheka Machine
Iko kusanganiswa kweiyo yakakura fomu X, Y axis laser yekucheka (kucheka) uye yakanyanya kumhanya Galvo laser perforating (laser akacheka magaro). Yakagadzirirwa kutemwa kwemachira emucheka mhepo duct (sock duct, sox duct, duct sox, duct sock, machira emhepo duct, air sock, air sox)
Model No: JMCCJG-250300LD
CO2 Laser Kucheka Muchina weTechnical Textile
The giya & pani inopepereswa Laser nokuveza muchina akasimba zvakakwana kuti ubvume yakakwirira nesimba CO2 Laser chubhu. It anoziva nakisa yakakwirira kumhanyisa nokukurumidza uye nokuveza pakukurumidza zvinobhururuka optics.
Model No: JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser Kugadzira Kutemwa kweMuchina wePuti, Leather
Iyi laser system inosanganisa galvanometer uye XY gantry. Iyo Galvo inopa kukurumidza kumhanyisa kunyora, etching, kuita pamwe nekucheka kwezvinhu zvakatetepa. XY Gantry inobvumidza kugadzirisa kwehukuru hukuru uye huwandu hwesitoko.
Model No: ZJJF (3D) -160LD
Isa kuti Kuisa Flying Fabric Laser achiita zvokutemera Machine
3D simba Galvo hurongwa, kupedza kuramba achiita zvokutemera kupenda imwe danho. "Riri nhunzi" Laser michina. Akakodzera hombe Manyorerwo rejira, Whitehead Textile, dehwe, denim, Eva achiita zvokutemera.
Model No: ZJ (3D) -9045TB
High Speed ​​Galvo Laser achiita zvokutemera Machine nokuda Leather Shoe
CO2 RF simbi Laser 150W 300W 600W. 3D guru galvanometer kudzora hurongwa. Automatic uye pasi Z akabatana. Automatic chomuruki zinc-simbi chiwanikwa muzinga rishande tafura.
Model No: ZJ (3D) -15050LD
Galvo Laser Kusimbisa Kutema Machine kweSandpaper Abrasive Disc
Yakakura-nzvimbo galvanometer yekuongorora masisitimu. Multiple laser masosi kuti uwedzere kubereka. Kuzvidyira otomatiki uye kudzokorora - conveyor…
Model No: CJGV-160130LD
Sublimation Fabric Laser Cutter kuti mbatya
Vision Laser rakanakira achicheka digitaalinen pakudhinda sublimation Whitehead Textile micheka maumbirwo zvose uye hukuru. Cameras atarise rejira, zvikavengwa kuziva akadhindwa gandiwa, kana kuzviona akadhindwa kunyoresa mavanga uye kucheka vakasarudzwa mazano nokukurumidza uye kururama.
Model No: QZDXBJGHY-160100LDII
Yakasununguka Dual Musoro Vision Kamera Laser Kutema Machine
The rakazvimirira misoro miviri Laser nokuveza gadziriro anonyatsorayiridzwa zvasangana akangwara chiratidzo hurongwa, uye zvakare optimized mune zvinodiwa akadhindwa Graphics kugadzira.
Model No: MZDJG-160100LD
High nemazvo kunyoresa mavanga Positioning uye noungwaru deformation muripo nokuda zvakarurama Laser nokuveza dhayi sublimation akadhindwa Logos, tsamba uye nhamba.
Model No: CJGV-320400LD
Wide Format Laser Cutting Machine nokuda Flags, Banners, Soft Signage
The guru chiratidzo Laser aricheke ndiyo zvikuru nokuda digitaalinen anodhinda indasitiri - kugadzira risingaenzaniswi nezvaanogona kuti vasapedze rakafara Manyorerwo digitally kudhindwa kana dhayi-sublimated Whitehead Textile Graphics, mireza uye nyoro signage.
Model No: LC-350
Pingudza kuRoll Label Laser Die Kucheka Muchina
Isina dhiva laser yekucheka uye yekushandura mhinduro yekuita label kupedzisa. QR kodhi yemuverengi inotsigira otomatiki changeover pane nhunzi. BST Web Dhairekitori inoita kuti kusarangarira uye kudzokorora kuve kwakanyatsojeka.
Model No: LC-230
Nyora Laser Die Cutting Machine
LC230 ndeye compact, yehupfumi uye yakazara digital laser yekupedzisa muchina neiyo yakawanda yewebhu yakafara 230mm. Icho chisarudzo chakanakisa che digital digit run. Kugovera zero shanduko yenguva uye hapana kufa kweplate mutengo.
Isu tinopa mhinduro dzemashandisirwo kunoenderana ne laser technology. Sarudza indasitiri yako: yakakodzera laser mhinduro kwauri iwe
With simba Michina utsanzi, Golden Laser anogona kupa customized Laser michina uye negadziriso, kuti kugadzirwa yako yakawanda uye zvinobatsira.
Sezvo ichikosha rokuita zvokugadzira zvinhu utsanzi, Laser ari kukura pamwe risingaenzaniswi zvazvakanakira, achitsiva kuwedzera tsika kwendangariro.
Laser Systems Bhurocha
About Golden Laser (PDF faira)
Nguva dzose kutsigira basa. Mainjiniya kuwanikwa basa michini mhiri kwemakungwa basa naro, kurovedza basa nokuchengetedza basa.
Kubudirira kweA Ndege Interiors - Zvigaro zveA Ndege
Laser yekugadzira tekinoroji yakura zvishoma nezvishoma uye inoshandiswa zvakanyanya mumotokari, kubhururuka uye machira & masanganiswa eminda. Iyo laser system inonyatso kukuunzira akakwana ekugadzirisa mabasa uye akati wandei mabhenefiti.
Icho Chakanakira Chisarudzo cheAconic Kucheka & Engraving - Laser Systems
Laser kucheka uye kunyora ndiyo yakanakisa yekugadzirisa nzira acrylic. Inopenya, yakachena uye murazvo wedonje edges. Yakakwira-chaiyo mashini. Inokodzera kugadzirisa matanho akasiyana siyana uye chimiro.
Nemazvo Manufacturing Kuedza Excellent
Laser Solutions Mukusarudza Provider
By kwemakore 20 'ruzivo mune Laser maindasitiri, akaramba kubudirira uye kushandisa akura ruzivo, Golden Laser rava aitungamirira akaigadzira Laser michina ine yakagozha customization kugona.
Golden Laser anokupa nyanzvi Laser negadziriso yako chaiyo chikumbiro indasitiri - kukubatsira kuwedzera negoho, ndirarame kubudiswa nzira uye kuti mamwe purofiti.
Munguva mhiri kwemakungwa kumusika, Golden Laser akagadza akura yokutengesa samambure munyika dzinopfuura 100 uye kumatunhu yose, zvedu yemakwikwi zvinhu uye musika vaifarira utsanzi hurongwa.
Galvo Laser Muchina
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co, Ltd.